PVC Transparent Soft malefaka sy hentitra Sheet extrusion line
Ny taratasy mangarahara vita amin'ny mangarahara amin'ny PVC dia manana tombony maro amin'ny fanoherana afo, kalitao avo, vidiny ambany, mangarahara ambony, faritra tsara, tsy misy toerana, onja rano kely, fanoherana avo lenta, mora volavolaina ary sns. ary tranga, toy ny fitaovana, kilalao, herinaratra, sakafo, fanafody ary akanjo.
Ny ravina malefaka mangarahara vita amin'ny volo dia ny vokatra fanoloana ny lambam-baravarankely nentim-paharazana. Malemy izy io, mazava, misisika, azo antoka, fiarovana ny tontolo iainana, fanoherana asidra, tsy misy fofona hafahafa, mora diovina, sns, azo ampiasaina amin'ny insulateur cold and heat, save angovo, porofon-drivotra, mitazona ny hamandoana, fanoherana ny kolikoly, porofon'afo, fanoherana ny static. porofo taratra UVtraviolet, porofon-feo, tabilao latabatra, jiro, fanalefahana indostrialy, fampitandremana fiarovana, fiarovana ny tampon'ny, ireo fampiharana ampiasaina amin'ny vata fampangatsiahana, sakafo, fanontana, fanenomana, herinaratra, fitaovana, fanafody, fitehirizana. Misy vokany tsara amin'ny insulation ho an'ny herinaratra ary ny jiro manimba.